Iitheyibhile ezingama-33 zeKhitshi eziGqwesileyo- Izimvo zale mihla zeeTafile zasekhitshini - Amakhitshi Amangalisayo
Ukusuka kwilizwe elinobuhle ukupholisa kunye nexesha langoku, sinezimbo zonke ezigutyungelweyo.
Jonga igalari 33Iifoto UWilliam Abranowicz 1I-33Itheyibhile yeTulip
KwiShelter Island eNew York, umyili wezakhiwo uCary Tamarkin kunye no-Suzanne Shaker uyile indlu efanelekileyo yaselwandle yanamhlanje. Kwindawo yokutyela, itafile ye-tulin yaseSaarinen ijikelezwe zizitulo zikaHans Wegner, ezongeza into eqingqiweyo kwindawo ecocekileyo. ( $ 2,126, knoll.com )
UFrancesco Lagnese MbiniI-33Uluhlu lweZiseko
Umyili wezakhiwo uHeidi Stôrmer wayila igumbi lesidlo sakusasa elinetafile yokutyela ka-Eero Saarinen. ( $ 2,126, knoll.com Itheyibhile ye iconic yahlula indlela oziva ngayo ngokwesiko.
Indlu entle 3I-33Itheyibhile yeSaarinen
Amagophe etafile enqabileyo yaseSaarinen aphikisana nemigca ethe tye kwigumbi lokuqala loyilo lwebhlog kaSarah Rose ( $ 2,126, knoll.com )
URay kachatorian 4I-33Itafile yeplanga
Eyilwe nguMyra Hoefer Uyilo, eli gumbi lokutyela libonisa itafile ngu I-Astier de Villatte . Ingqolowa yeenkuni iyangqinelana nemiqadi engaphezulu.
UWilliam Abranowicz 5I-33Itheyibhile eqingqiweyo
Izitulo ezingwevu ezingwevu zibonelela ngombala ocacileyo ongathath'icala Sihlalo weHickory Iinkcukacha Itafile kaGustav -Igumbi lesidlo sakusasa ngokuqinisekileyo ligumbi lasekuseni, utshilo uMichael Smith ngeli khaya lasekhaya lase-Upper East Side. Kukhanya kwaye kunomoya, kunye neembono ezintle.
UFrancesco Lagnese 6I-33Itafile yokutya eyandisiweyo
Musa ukuwajonga amaqabunga etafile! Kwikhaya le-1920s, ngokufanayo Itafile kaGustav Uhlala kwigumbi lesidlo sakusasa esiluhlaza kodwa wongeza esihlalweni sesithandathu kwisidlo sangokuhlwa.
UFrancesco Lagnese 7I-33Itafile yebar
Yeyona ndlela ifanelekileyo yokhetho olufutshane, njengoko itafile ende ithatha indawo encinci. Thatha ikofu yakho yasekuseni ujonge itafile nge UJanus et Cie .
imibala ehambelana nobomvu
Ngoc Minh Ngo 8I-33Itheyibhile etyheli
Udonga olutyheli olutyheli kunye netafile ye-citron eqaqambileyo ukusuka HB Ikhaya yazisa ikhitshi lowe-1940 ebomini.
UTomas loof 9I-33Itheyibhile ephezulu yeglasi
Iglasi-ifakwe Itafile yokutyela yeSilverado yi-CB2 inikezela ngemilenze emininzi ngaphezulu kwebhaskithi esongelwe kule nook enelanga.
IMick Hales 10I-33Itheyibhile ye-Elm
Itheyibhile ye-elm yoxande ukusuka IHammertown inika indawo eninzi yeendwendwe kwindlu yaseConnecticut ehonjiswe nguDana Simpson noJoan Osofsky.
UVictoria Pearson Shumi elinanyeI-33Itafile yesidlo sakusasa sokhuni
Kwindawo yesidlo sakusasa ye- Indlu yeCorona del Mar , ikhandlela lijinga ngaphezulu kwetafile yaseStuart ngo URichard Mulligan , Ukudala indawo yokutyela echaziweyo.
UJulian Wass 12I-33Itafile enemilenze ecacileyo
Izinto ezingafihliyo zinceda ukwandisa ukukhanya, ukudala ukuziva okuphangaleleyo. Ukulinganisela kwii-Plexiglas cylinders, itafile yesidlo sakusasa ukusuka Oomph ibonakala idada kwi- Ikhitshi elimhlophe elimhlophe eyilwe nguLouise Brooks.
UTara Donne 13I-33Itheyibhile yeenyawo zeGlasi
Umyili u-Amanda Nisbet uye wenza a Itafile kaJulian Chichester Dakota kwigumbi elivulekileyo lendlu yaseNew York.
U-Luca ufunyenwe 14I-33Itafile yekofu
Ephefumlelwe ziivenkile zaseFrance, umyili uStephen Shubel wayila iitafile zencopho yegumbi lesidlo sakusasa kwikhaya lelizwe laseCalifornia.
BEATRISE YONXWEME Shumi elinantlanuI-33Itafile yokulwa
Umyili uMichelle Adams wakhetha itafile ye-pine trestle yangekhulu le-19 kwikhaya lakhe le-1920s.
UJohn Kernick 16I-33Yenza isangqa kwitafile
Umyili u-Annie Selke uyihombisile le nto Indlu yaselwandle yaseChatham nezitulo zasekhitshini kunye netafile ngu Ikhaya lika-Annie Selke .
flip okanye flop abantwana
UVictoria Pearson 17I-33Itheyibhile yaselwandle
UChris Barrett wayila itafile nezitulo zamagumbi okutyela ezingama-1950; ucofe izitulo kwaye wenza isiseko setafile yokubonela ukunika ifanitshala uvakalelo 'lwaselwandle'.
ULisa Romerein 18I-33Itafile yeNdlu yokuFama ephumlileyo
Izitulo ze-Wicker zijikeleze itafile yefama yesiqhelo ukusuka IiGadi zeMecox , evuselelwe yimibala emthubi emhlophe kunye nemiqamelo.
U-Anne Schlechter 19I-33Itheyibhile yokuchongwa kweAntique
Le khitshi yaseSpain yokuVuselelwa kwamaKoloni ngo-1850 itafile yesingesi yesiNgesi inendawo ezaliswe ngumlinganiswa engqengqa imiqadi yeenkuni ngasentla.
U-Eric Piasecki Amashumi amabiniI-33Itheyibhile yeKhitshi eyongezelelweyo
Ekuqaleni igumbi lokuhlala, eli khitshi lendlu yasefama linembonakalo ye-atypical. 'Ndiphuphe ngendlu apho upheka khona utye kwaye uhlala kwigumbi elinye, utshilo umakhi uRuard Veltman. Itheyibhile yeteak yeenyawo ezili-11 ubude yile Verellen .
UAnnie Schlechter amashumi amabini ananyeI-33Itafile zesitayile saseScandinavia
Itafile yesiko ene- I-White Zeus eQhelekileyo yenza i-sleek vibe yaseSweden kule khitshi encinci
UTomas loof 22I-33Ipeyinti yeNdlu yeeFama
'Yikhitshi yasekhaya yasefama, kodwa imibala iyi-idiosyncratic, yobuqu, kwaye inamandla ngakumbi kunombala omhlophe okanye ongwevu,' umyili uKari McCabe utsho ngendlu eseNew England. Ngombala owongezelelweyo, imilenze yetafile yaseMelika yenkulungwane ye-19 ipeyintwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka.
ULuka White 2. 3I-33Uhlobo lweSweden
Indawo yesidlo sakusasa ekhitshini laseScandinavia inetafile yeediliya kunye nezitulo ezivela Ukuchasana .
epholileyo kulula ithanga nangokukrola
U-Eric Piasecki 24I-33Ukongezwa kwesiqithi
Kweli khaya lendabuko lentaba eliyilelwe nguRuard Veltman, itafile eyenziweyo eyenziwe ngokweziqhelo igxotha isiqithi sekhitshi ukwenza indawo engakumbi yokulungiselela kunye nokukhuthaza ukutya.
UVictoria Pearson 25I-33Itheyibhile yeRustic etyheli
Kwindlu yaseLos Angeles, ikhitshi linomoya opholileyo ohambelana nendlu yowe-1939. Iithoni ezityheli zetafile yaseNgilani yenkulungwane ye-19 zidlala kumbhoxo ombala.
UFrances Janisch 26I-33Itheyibhile yeFama yaseFrance
Umyili uSuzanne Kasler ubuyise ukutya ekhitshini ngokudibanisa izitulo zokutyela zaseLouis XV kunye netafile yefama yaseFrance yenkulungwane ye-19.
UMhlanga Davis 27I-33Itheyibhile yekhitshi leWalnut
URobbin noHillary Hayne bayile itafile yokutyela enesisa, eyenziwe ngeeplanga zeewnut ezili-12 ubude.
UVictoria Pearson 28I-33Itheyibhile ye-Antique yeSlavic
UChris Barrett wafumana itafile ende ye-1860s yaseCzech, enemilenze ejika kakuhle UJF Chen . Isebenza ngokugqibeleleyo kwindawo 'encinci kakhulu ukuba itafile yokutyela kwaye inkulu kakhulu ukuba ingabinanto,' utshilo u-Barrett, esebenza njengesiqithi sakusasa kunye ne-buffet yokutyela kwi-terrace.
UDouglas Friedman 29I-33Itafile yeZinc
'Ndiyayithanda imbono yento endala, kwaye le tafile ye-zinc yakudala ikhangeleka ngathi ibinokutsalwa ungene egadini, utshilo uKen Fulk malunga Ikhitshi lika-2015 lonyaka .
UTara Striano 30I-33Isiqithi somfanekiso
Isiqithi somzobo, esenziwe nge-oki ewileyo kunye nelogo ebhalwe ngesandla eyenziwe ngetsheri emhlophe, iseta ithoni yokuthanda oku Igumbi laseBrooklyn eline-square-foot-400 .
OkulandelayoIindlela ezili-10 zokongeza indawo yokugcina ekhitshini lakho Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukuba babonelele ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
imifanekiso yemigangatho yokuhlambela
U-erin kunye no-ben napier
indlela yoku-ayina amaphepha